ကျွန်တော် မသိခြင်းများ .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျွန်တော် မသိခြင်းများ ..
ကျွန်တော် မသိခြင်းများ ..
Posted by ချစ်ရင်ထူး II on Jun 29, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
ရင်ထဲက ခံစားချက် အတိုင်းရေးထားပါသည် ..
ကျွန်တော်က အပြင်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ် ။ ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း သေသေချာချာ ခန့်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်က စီးပွါးရေးလုပ်သလို လူတိုင်းလူတိုင်းကလည်း သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ်ထွာ အတွက် စီးပွါးရေး ကိုလုပ်ကိုင်ကြရမှာပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မလုပ်ဘူးဆိုရင်တောင် ကူညီပေးရမှာပါ ။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတော်မှာလည်း စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ရာထူးအဆင့်အလိုက် လစာ အသီးသီး နဲ့ခန့်ထားပါတယ်။ ယေဘုယျ သဘောအရ အတူတူပါပဲ ။ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ရေးဆွဲရင်တော့ မတူတာများပါတယ်။ အစိုးရက ဒီနှစ်အတွက် ဆိုကြပါစို့ တံတားဆောက်မယ်၊ တံတားအတွက် ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးကို တွက်ချက်ပြီးမှ အဲဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့ ငွေကို ပြည်သူတွေ ဆီကနေ အခွန် အနေနဲ့ကောက်ခံတာဖြစ်ပြီးတော့ ၊ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီနှစ်အတွက် ရရှိတဲ့ အမြတ် ကနေ လုပ်ငန်းအတွက် အဓိက လိုအပ်မယ့် ပစ္စည်း ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကထားဦး …
ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေး ကို ဆက်ပါဦးမယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ အကြောင်းပါ ။ ရုံးတစ်ရုံးကို ဝင်လိုက်ရင် ဘယ်သူ့ကို အဘ ခေါ်ရမှန်း မသိပါဘူး ၊ဟိုစားပွဲကြည့်လည်း လူမရှိ ၊ဒီခုံမှာလည်း သတင်းစာတွေက ပြန့်ကျဲ .. ၊ မနက် 9.00 ရုံးတက်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား၊ ညနေဆို 3.00 လောက်သွားကြည့် တစ်ယောက်မှ မရှိကြတော့ဘူး ။ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲ။ ကျွန်တော်က ငွေလွှဲတော့ ဘဏ်ကနေ လွှဲပါတယ်၊ အစိုးရ(စီးပွါးရေး) ဘဏ်ပေါ့ဗျာ ။ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေက တစ်ယောက်မှ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်မရှိကြဘူး။ ကျွန်တော့်ဆိုင်က ဝန်ထမ်းတွေ အဲလိုလုပ်ကြည့်ပါလား၊ ကျွန်တော်အဲလို တွေးမိပြီးတော့ အဖြေကို ရှာကြည့်ပါတယ်။ ဘာကွာနေတာလဲ ၊ ဘာတွေ ခြားနားနေတာလဲ ၊ လစာက အတူတူလောက်ပေးထားတာပါ ၊။
ဟော တွေ့ပါပြီဗျာ ၊ ပုဂ္ဂလိက နဲ့ အစိုးရ ကွာခြားတာပါတဲ့ ။ ဥပမာဗျာ – မ.ယ.က ရုံးတစ်ရုံးဆိုပါတော့၊ ဥက္ကဋ္ဌက စာရေးတွေကို သိပ်မှမပြောဘဲနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ ၊ စာရေးတွေ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ လုပ်ရင် သူက ပြောရမယ်၊ အပြစ်ပေးရမယ်၊ ( ခုက သူကိုယ်တိုင် စားတာ)အဲလို မလုပ်တော့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ ဘာလို့ သူ(ဥက္ကဋ္ဌ)က မပြောတာလဲ ဆိုတော့ သူ့စီးပွါးရေး မှ မဟုတ်တာပဲလေ၊ နစ်နာသူက အစိုးရလေ၊ နေရင်းထိုင်ရင်း အပြောခံရတာပေါ့ ။ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တစ်ခုခုကိုသွားကြည့်လိုက်ပါလား၊ ဆက်ဆံရေးက ဘယ်လို ဆိုတာကို၊ ကျွန်တော်က အဲဒီလိုဖြစ်စေချင်တာဗျ ။
နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံရေးပါ၊ ခုနေ ဦးဇာဂနာ လိုလူက အာဏာရ ပါတီ ကိုသရော်တဲ့ ပြက်လုံးနဲ့ ပြက်လိုက်တယ်ဆိုပါဆို့ ..ချက်ချင်း သူ့ကို လာဖမ်းတော့မှာပဲ (၊ဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှည်မယ်နော် ..
ဦးဇာဂနာတို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ၊ မင်းကိုနိုင်တို့ ကိုဖမ်းတယ် ၊ ရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး၊ ၅။(ည) နဲ့ဖမ်းတာ များပါတယ်။အဲဒါဆို ပြောင်းပြန် ပြန်ပြောမယ် အဲဒီ အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေက အာဏာရပြီဗျာ ကျွန်တော်က သူတို့ကို သူတို့တုန်းကလိုပဲ ဝေဖန်မယ် ပြက်လုံးထုတ်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော့ ကိုရော မဖမ်းဘဲ နေမှာလား၊ …) ခုနကဟာလေး ပြန်ဆက်မယ် အထက်က အရာရှိ မသိခင်ကို ဖမ်းတော့တာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရာရှိက ကိုယ့်ကို အမြင်မကြည်မှာစိုးလို့လေ ။ ဟောဗျာ .. အဲဒီမှာကျတော့ အမြင်မကြည်မှာစိုးလို့ ဖမ်းတယ် ၊ အမိန့်ထုတ်တယ်၊ အဲလိုတွေ လုပ်သလား၊ ရုံးမှာကျတော့ ရော ????? လာဘ်ပေးလာဘ်ယူသူအရေးယူမည် တဲ့ အဲဒါကတော့ တစ်ကယ့်ကိုပဲ ရေးထားတာနဲ့ တစ်လွှဲဖြစ်နေတာပါ ။ မရောင်ရာဆီလူး အောက်ကလူတွေက ငတ်လို့လုပ်နေရတာ ကို နည်းနည်းခွင့်လွှတ်လို့ ရသေးတယ် ၊ အထက်က ပိုဆိုးနေတယ်၊ ရဲ တွေ လကုန်လို့ လစာ သွားထုတ်ရင် တိုင်းမှုာ တည်းက ဖြစ်လွှတ်လိုက်တာ ။ ကျောင်းဆရာတွေ ရောပဲ ။ အဖြတ် အတောက် တွေက များလွန်းနေတယ်။ တိုင်းကနေ ညွန်ကြားလိုက်တယ်၊ ဘာလုပ်လိုက်ပါ၊ သူတို့က အမိန့်ပဲ လာတာ ၊ ပိုက်ဆံက မလာဘူး၊ အောက်ကကောင်တွေက ဘယ်နားကနေ ဘာကို ဘယ်လို သွားလုပ်ရမှာလဲ၊ ???
ခုဆိုရင် မိုးရာသီ ရောက်နေပါပြီ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နေကြပါပြီ ၊ မယုံရင် ကိုယ်တိုင်လာကြည့်ကြပါ ၊ လယ်ထဲမှာ ရေမရှိပါဘူး ၊ သူတို့ ပြောနေတဲ့ ဆည်မြောင်း က ဘယ်ရောက်နေတာလဲ ၊ ဆည်မြောင်းမှာ ရေတွေကိုလူကြီး လာကြည့်ဖို့ ထည့်ထားတာလား ၊ အဲ လူကြီးလဲ ပြန်သွားရော (လယ်က စိုက်ပြီးကုန်ပြီ ၊ မိုးကလည်း ရွာနေတယ်) ရေကလွှတ်ရော ၊ အဲတော့ စပါးတွေ သေကုန်ရော ၊ မလွှတ်ရင် ဆည်က ကျိုးတော့မယ်လေ ၊။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း ။
အရင် အစိုးရ လက်ထက်တုန်းကပါ ။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ဦးသန်းရွှေ လာတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆောက်လုပ်ရေးက လမ်းခင်းနေတယ် ။ လမ်းခင်းတာက တခြားနေရာပါ ( သူလာတဲ့ နေရာ မဟုတ်ဘူး) အဲဒီမှာ ဦးသန်းရွှေက ပြောလိုက်တာ လမ်းကလည်း ဆိုးလိုက်တာ
အဲဒါလေး ပြောလိုက်တာဗျာ ခင်းလက်စ ကိုရပ်ပြီးတော့ အဲဒီလမ်းကို ပြောင်းခင်းတယ် ။ဆိုတော့ သူက ဆိုးတယ် ပြောတာနဲ့ ခင်းတယ် ၊ မပြောရင်မခင်းဘူး၊ လမ်းအကောင်းကြီးကို မကောင်းဘူးဆိုပြီး ပိုက်ဆံ တောင်းတယ်၊ ဘတ်တယ်၊ အခင်းပြတယ် ၊ အများကြီးပါပဲ ။ အောက်ခြေမှာ အဲလိုတွေ ဖြစ်နေတာကို သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် မသိတာလား။ မသိခြင်ယောင် ဆောင်နေတာလား ၊ ဒါမှ မဟုတ် အားပေးကူညီ နေတာလား ၊ သိချင်ပါတယ် ။
ပြီးတော့ ဦးသိန်းစိန် က ကျွန်တော် မဲ ပေးထားတာ မဟုတ်တော့ ပြောလို့ မရနိုင်လောက်ပါဘူး ။ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို မဲ ပေးထားတဲ့ လူ ကိုပဲ ကြည့်မှာပေါ့ ။ ခုဆို ကြည့်တောင် မကြည့်သေးပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဖိနှိပ်ခံ နေရတာကို သမ္မကြီးခင်ဗျား ကျွန်တော်က သမ္မကြီး ကို မဲပေးခဲ့တဲ့လူပါ လို့ ဘယ်လို ပြောမလဲ ။ ရှင်းရှင်းလေး နဲ့ ရှုပ်နေတယ် ။ ။
သည်းခံပြီးတော့ ဖတ်ပေးကြပါဗျာ .. ကျွန်တော်က စာ အရေးအသား မတတ်တော့ .. ပြောချင်တာကတော့ ပြောရမှာပါလေ .. မတတ်နိုင်ဘူး .. ဝေဖန် ပေးကြပါဦးနော် ..
ဝေတော့ မဝေဖန်နိုင်သေးပါဘူး ..
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော် အဲ့လောက် မသိသေးလို့ပါ ..
ပြောထားတာတွေ အများစုကတော့ မှန်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါကြောင်း ….။
အစိုးရရုံးဆို ယောင်လို့တောင် မသွားချင်သူ
တောက်တဲ့ သတိထားနော် .. နင်က ဈေးကောင်းတယ် ပြောတယ်..
သားဂ အကောင်သေးပါလယ်ချင့် …
ဈေးကောင်း ရမှာ ဟုတ်ပါဘူးချင့် …
ခုလို တတိပေးဒါ တေးဇူးပါချင့် ..
အိုကွယ် .. အကောင်သေးလည်း အဆိပ်ရှိတာပဲ .. မရဘူး ဖမ်းပြီးတော့ တီလုပ်ပြည် ကိုပို့ရမယ် ..
မဖြစ်ပါဘူး .. ဒီတောက်တဲ့ ကိုတော့ ပို့ကို ပို့မှ ပါပဲ ..
အခုလောလောဆယ် အထက်ပိုင်းတွေကို ဖြုတ်နား အစီအစဉ်နဲ့ အရင်သွားနေတယ်လို့ထင်တာပါဘဲ
“အာဏာ” ဆိုတာကို စီးပွါးရေး ဈေးကွက်ထဲက “ ရောင်းကုန် ” တစ်ခုလို သဘောထားပြီး၊
ကြိုက်သလို ဝယ်၊ ရောင်း၊ ဈေးကစား၊ အသုံးချနေကြတဲ့ သူတွေကြီးစိုးနေရင်တော့
နိုင်ငံ နဲ့နိုင်ငံသားတွေ အထိနာနေမှာပဲ။
အစိုးရဌာနတွေအားလုံးက တဆင့်ပြီးတဆင့် ပျက်စီးလာတာ နှစ်ပေါင်းကြာပြီဆိုတော့
အစအဆုံး ပုံအသစ် လူအသစ်တွေနဲ့ ပြန်ဖွဲ့စည်းမှ အလုပ်ဖြစ်တော့မှာ
စကားမစပ်- ဒီဆိုက်ထဲမှာ ရာထူးကြီးကြီး တွေ ရှိတာ ကြားထားပါတယ်နော..
ကြည့်ရတာ သူတို့လဲ လက်မှိုင်ချထားရပုံ ပေါ်ပါတယ်….
လောကကြီးရဲ့ ပူလောင်မှုတွေကို ရင်ဝယ်မပိုက်ကြပါနဲ့
မကောင်းတဲ့နေရာက များနေလို့ လိုက်မမှီဘူးနေမှာပါ။